Top Ten Torrent Sites များနှင့် အသုံးပြုပုံများ ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » အထွေထွေ » Top Ten Torrent Sites များနှင့် အသုံးပြုပုံများ
By နေမင်းမောင်8:04 PM5 comments
Software ရှာဖို့အတွက်က Torrent Sites တွေကိုအသုံးပြုရတာ ပိုပြီး အဆင်အပြေဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ ???
ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ ရက်စွဲကို အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါ။ အချို့အချို့သော Software တွေက ၄ နှစ် ၅ နှစ်တွေ ဖြစ်ကုန်ပါပြီ ။ ဒါဆိုရင်တော့ Download လုပ်ဖို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။
ဒုတိယတစ်ချက် Software Size ကိုကြည့်လိုက်ပါ။ မိမိအသုံးပြုမယ့် Software ဆိုဒ်က Torrent Sites မှာဖေါ်ပြထားသလောက်ရှိရဲ့လားဆိုတာပါ.။ တစ်ချို့ ဖိုင်တွေက ပါမလာတတ်တာတွေလည်း ရှိတတ်လို့ပါ။
တတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ Seed ကိုကြည့်ပေးပါ။ Seeders များလေလေ Download ချဖို့ပိုပြီး အဆင်ပြေလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Leech များနေရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါတယ်။
ချွင်းချက်အနေနဲ့ကတော့ Comment လေးတွေ ဖတ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ Comment တွေမှာ အဆင်မပြေတာလေးတွေ ရေးထားတာတွေ့ရင်တော့ နောက်တစ်ခု ထပ်ရှာတာက အချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ်။ Download လုပ်ပြီးမှ အဆင်မပြေရင် ကိုယ်ပဲ အချိန်ကုန် လူပမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ Top Ten ထဲမှာပါတဲ့ Torrent Sites တော်တော်များများကို ဖေါ်ပြပေးသွားပါ့မယ်။ အောက်မှာကြည့်ရအောင် ...
၁။ ပထမဆုံးကတော့ KAT လို့ခေါ်တဲ့ (Kickass torrents ) Sites တစ်ခုပါ ။ Top Ten မှာ First ချိတ်ပြီး အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ Sites တစ်ခုပါ။ ဘာသာစကား (၃၃) မျိုးကို Support လုပ်ပေးနိုင်ပြီး High Quality Results ရတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။
လင့်ခ်ကတော့ - https://kickasstop.com ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒုတိယ ဆိုဒ်တစ်ခုကတော့ Torrentz ပါ ။ domains 61 ခု ၊ စာမျက်နှာပေါင်း 69,511,217 မှာ Indexing 55,335,060 torrents ပါရှိတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ 2016 ခုနှစ်အထိ ဒုတိယနေရာမှာ ချိတ်နေတဲ့ Sites တစ်ခုပါ။
လင့်ခ်ကတော့ https://torrentz2.eu ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သုံးခုမြောက်ကတော့ YTS.ag ဆိုတဲ့ Movies torrent တစ်ခုပါ။ Movies torrent ဆိုတဲ့အတိုင်း High definition (HD) hollywood movies တွေကို excellent 720, 1080p ၊ 3D quality ကနေ အသေးဆုံး smallest file size အထိ Download လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Torrent Sites တစ်ခုပါ။
လင့်ခ်တော့ https://YTS.ag ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ ဒီတစ်ခုကတော့ Piratebay ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ game torrent files, movie torrent files, mp3 torrent files စတဲ့ အမျိုးအစားတွေအလိုက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ Download လုပ်နိုင်တဲ့ Site တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။
လင့်ကတော့ https://Thepiratebay2.org ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ ဒီတစ်ခုကတော့ Rarbg ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ Games, music, movies, software တွေနဲ့ ebooks တွေကို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ Download ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လည်း Popular ဖြစ်တဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။ Torrents ဆိုတဲ့ Tab ကို ဝင်မှသာ Search box တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
လင့်ကတော့ https://rarbg.to ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ဒီတစ်ခုကတော့ isoHunt ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ Peer to peer torrent search engine ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။ နေ့စဉ် Update လုပ်ပေးနေသလို Delete လုပ်နေတာတွေလဲရှိတဲ့အတွက် Download လုပ်လို့မရမယ့် Torrent ကတော့ မရှိသလောက်ပါပဲ ။ အသုံးဝင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုပါ။
လင့်ခ်ကတော့ https://isohunt.to/ ဖြစ်ပါတယ်။
၇။ ဒီတစ်ခုကတော့ Extra Torrent လို့ခေါ်တဲ့ Movies torrents, TV, Music, Anime, Games, Books, images တွေနဲ့ mobile torrents links တွေတော်တော်များများကို စုံစုံလင်လင် ရှာဖွေပေးနိုင်တဲ့ Sites တစ်ခုပါ။ လင့်ခ်ကတော့ https://extratorrent.cc/ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၈။ ဒီတစ်ခုကတော့ EZTV လို့ခေါ်တဲ့ tv program torrent files တွေအတွက် ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။
လင့်ခ်ကတော့ https://eztv.ag/ ဖြစ်ပါတယ်.
၉။ ဒီတစ်ခုကတော့ Games, hd movies, software, tv shows တွေ ebooks တွေကို နေ့စဉ် Upload လုပ်ပေးနေတဲ့ Monova ဆိုတဲ့ Torrent ဆိုဒ်တစ်ခုပါ။ ဝင်ရောက်သူပေါင်း ၄.၃ မီလီယမ်ရှိပါတယ်။
လင့်ခ်ကတော့ http://Monova.org ဖြစ်ပါတယ်။
၁၀။ ဒီတစ်ခုကတော့ Torrent Funk ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး နေ့စဉ် Torrent ပေါင်း ၁၈၀၀ ကျော် Upload လုပ်ပေးနေတဲ့ Popular ဆိုဒ်တစ်ခုထဲမှာလည်း အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လင့်ခ်ကတော့ https://Torrentfunk.com ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်မရတာကြောင့် ဆိုဒ်ကိုလည်း ကျွန်တော်ပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေခဲ့တာလည်း ကြာပါပြီ။ နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ အချိန်ရရင် ရသလို ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေများ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် အကြောင်းအရာများကိုလည်း ရေးပေးသွားဦးမှာပါ။ Download ချနည်းကိုတော့ ကျွန်တော်အရှေ့မှာ တင်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်။ လင့်ခ်ကိုလည်း ထပ်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ကြည့်ပေးပါ။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
123 100 September 5, 2016 at 5:18 PM
ကျေးဇူးပါ အကိုရေ ကျွန်တော် KAT ဆိုက်ဝင်လို့မရတော့လိုစိတ်ပျက်နေတာ အခုပိုစ်ကိုဖတ်လိုက်ရတော့ အဆင်ပြေသွာတယ် နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော ကျွန်တော့်အတွက်တော အကိုဟာ တကယ့်ဆရာကြီး ကျေးဇူးရှင်ပါ အကိုနေမင်းကျန်းမာ ၍ ချမ်းသာပါစေလို ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ် တောသားလေး
Myint Than October 15, 2016 at 8:14 PM
Thanks ko nay min maung.
Myint Than October 15, 2016 at 8:17 PM
Computer day & date setting မှန်တယ်
E mail အဝင်အထွက် time မှားနေတယ်
Myint Than October 15, 2016 at 8:30 PM